Nomad Titanium, bhanhire rekutanga kune yako Apple Watch | Ndinobva mac
Nomad Titanium, bhanhire rekutanga kune yako Apple Watch
Musika weApple Watch tambo yakakura chaizvo uye tinogona kuwana ese marudzi emabhanzi anowanikwa kune edu smartwatch, nemhando dzese dzezvinhu nemitengo yakasiyana. Ino nguva isu tine mukana wekuyedza imwe yeaya mabhandi ari pamusoro pevamwe zvese maererano ne mhando yezvinhu, dhizaini uye nyaradzo yekushandisa.
La Nomad Titanium inopa mushandisi mukana wekuti "apfeke" wachi yeApple netambo yakagadzirwa netitanium, ine magadzirirwo emhando yepamusoro uye pamusoro pezvese nekureruka uye kugadzikana izvo zvishomanana zvinobatanidza tambo kupfuura izvo Apple zvaakatipa.
1 Zviri mubhokisi
2 Inoshamisa Nomad dhizaini
3 Mutengo weNomad ndi ...
Isu tatotanga kubva ku «kurongedza» zvakasiyana kubva pane zvakasara zvemabhande. Nyaya yaNomad Titanium iyi inotinyevera kuti isu takatarisana netambo yakasiyana kubva kune iyo yatinogona kuwana mumusika, iine mhando dzakanaka. Mubhokisi chairo tinowana iyo titanium tambo, chishandiso (chine butiro rayo) kubvisa maratidziro uye kugadzirisa kuyerwa kwetambo, chifukidziro chekuti kana tisingashandise tambo uye zvinoverengeka zvitambi zvekambani.
Tambo yacho yakareba asi inogona kugadziriswa nechishandiso chakawedzerwa mupakeji, tambo iyi iri kubva pa135mm kusvika pa220mm saka zvichave zvakakodzera kuchinjisa kune yedu chiyero chishandiso chinowedzerwa kuchichinja chinodiwa. Iko kushandiswa kweichi chishandiso kuri nyore uye kunokutendera kuti ubvise zvinongedzo zvinodiwa kuti tambo ikwane ruoko rwedu. Izvo hazvina kuomarara zvachose uye chero munhu anogona kuzviita.
Inoshamisa Nomad dhizaini
Iyi yekubatanidza tambo ine yemhando yepamusoro dhizaini uye isu tinogona kutaura kuti ndeimwe yeakanaka kwazvo tambo akapfuura nepamaoko edu. Zviripachena kune varavara ravanofarira sezvavanotaura, asi hunhu hunofashukira mune ino tambo ine dhizaini inogadzira yedu Apple Watch inotaridzika zvakanyanya zvemitambo uye yakaomesesa patinoishandisa.
Muchiitiko ichi, mugadziri anosarudza gadzira tambo idzi chete kune 42mm uye 44mm Apple Watch mhando, saka hatina kuwanikwa mumamodeli ane saizi diki. Chikamu chinokwana kesi yekutarisa chinoshanda chose kune ese mamodheru uye hatizove nematambudziko kuishandisa. Kureruka kwetambo nekuda kwezvinhu zvekugadzira zvinoita kuti ive imwe yandaifarira tambo.
Dhizaini yacho hazvo zvese zviri mune ino tambo uye kugadziriswa kweNomad iyi neyewachi kesi kwakakosha nguva ino sezvo vachizvipa izvo mutambo mutambo kune wachi yatinoda zvakanyanya. Chikamu ichi chinosiyanisa tambo yewachi uye yoichichinja kuita chimwe chinhu chakanyanya kuumbika, sekunge inoratidza mhasuru isingarasikirwe nerunako dhizaini dhizaini iyo iyo Apple Watch Series 4 inayo, inova wachi iyo yatakaedza nayo tambo iyi. Ehezve, ndiyo yakasimba poindi yerudzi urwu tambo, dhizaini yayo inoshamisa.
Mutengo weNomad ndi ...
Panguva ino patinoda tambo yekugadzirwa kwayo, mhando uye zvimwe, chakanyanya kukosha chinhu Ongorora mutengo uye isu tinogona kutaura kuti izvi zviri pachena kuti zvakakwirira asi kwete zvakanyanya kana tikazvienzanisa nemabhande akafanana kana maapuro eApple chaiko, saka haufanire kuisa maoko ako kumusoro wako futi. Mutengo weiyi titanium tambo yakaitwa naNomad uye yeiyo yatove isu kufambira mberi kwayo kwepamutemo kuvhurwa mavhiki mashoma apfuura madhora makumi mana nemapfumbamwe saka uchienzaniswa nemitengo ingangoita mazana mana emaeuro eApple tambo mune yakachipa yakachipa, haina kudaro inodhura futi.
In the Nomad online chitoro iwe unowana iwo maviri mamodheru kana kuti ndoda kupedzisa kuti ivo vanowanikwa, iyo nhema uye sirivheri. Pachokwadi isu takavamirira kuti vasvike kuzvitoro zvakaita seMacnificos kana maAmazon ayo atove nezvimwe zvigadzirwa kubva kufemu iyi, asi parizvino zvinongowanikwa pawebhusaiti yepamutemo.
Dhizaini uye yekugadzira zvinhu
Hook-up mhando neiyo wachi yekutarisa
Maviri anopedzisa eiyo grey uye sirivheri modhi
Izvo hazviwanikwe kune iwo 38 uye 40mm mamodheru
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nomad Titanium, bhanhire rekutanga kune yako Apple Watch
Tichaona iyo nyowani AirPods 2 pane yakakosha Kurume 25?
Leander Kahney atove neTim Cook's biography yakagadzirira kuburitswa